Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo ka digtay in Muqdisho lagu dhigo Xafladaha Ciida Kirismaska – STAR FM SOMALIA
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka digtay Xuska Munaasabadda Ciidda Kirismaska iyo xafladaha kale ee loogu dabaaldago Bilowga Sanad walba, iyadoo ku amartay laamaha Ammaanka Dowladda inay ka hortagto isku dayo lagu abaabulayo xafladahaas.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Sheekh Maxamed Kheyrow ayaa sheegay in arrintan haddii Umadda Soomaaliyeed ay sameeyaan ay wax badan U dhimayso Caqiidadooda, isagoo soo jeediyay in laga feejignaado.
“Waxaad la socotaan in fooda nagu soo heyso maalmaha wadamada ku abtirsada Masiixiyada ay xusaan una dabaal dagaan Ciida Kirismaska ama Christian Hollydays u dabaal dagaan, laga bilaabo todobaadkan ilaa dhamaadka bishan soo socoto, waa caado iyo caqiido u gaar ah umadaha adduunka ee masiixiga ah”ayuu yiri Sheekh Maxamed Kheyrow.
Agaasimaha ayaa ugu baaqay Hey’adaha ammaanka dowladda, gaar ahaan Talisyada Booliska iyo Nabadsugida inay ka hor-tagaan arrintan, isla markaana laga feejignaado hadii la qabto xafladahaas inay dhibaatooyin dhacaan.
Dhinaca kale Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah Afhayeenka Hey’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa isna ka digay in hotelada lagu qabto xafladahaas, isagoo xusay in hadii ciidaha Masiixiga ah la xuso ay noqon karto mid ay qiil ka dhigtaan Al-Shabaab sida uu yiri.
“Waxaan u sheegayaa laga bilaabo Madaxweyne ilaa degmo, ciidamada amniga in aan wadankaan fasahaad iyo fidno sabab loogu noqon in ciida Kirismaska oo aan waxba naga gelin oo gaalo u dabaal degaan in la qabto, in dad Muslim ah inta la yiraahdo Hotelo waa weyn baa ciidul Kirismaska lagu dhigayaa sax ma ahan, Culimadu arrintaas waa ka digeysaa, Waxaa Shabaabku doonayaan oo ay dhihi lahaayeen diin la’aan baa meeshaas ka jirta, yaan Shabaabka qiil loogu sameyn”ayuu yiri Sheekh Nuur Baaruud.
Si kastaba ha ahaatee digniintan ka soo baxday Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan, bilshada sanadka cusub ee Milaadiga ah, iyadoo dadka aan Muslimiinta aheyn ay sameeyaan dabaal degyo loogu magac daray Kirismaska.
Tirada Muhaajiriinta ee sanadkan gaaray Yurub oo lagu qiyaasay Hal Milyan oo ruux